Tontolo_iainana · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Marsa, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Marsa 2011
Azia Atsinanana 18 Marsa 2011
Mendri-piderana ny fikirizan'ny olona hilanja fandraketan-tsary sy haka lahatsary na dia be aza ny tsindry mahazo azy ireo eny an-kianja eny noho ny fihetsehan'ny tany itsahana. Lahatsary avy amin'olon-tsotra noraketina tamin'ny Zoma 11 Martsa nandritra ilay horohorontany sy tsunami nadravarava toerana maro tao Japana izao no mameno ny Youtube. Anatin'ireo maro ifampizarana any anaty aterineto, indreto misy vitsivitsy.
Ilay horohorontany niaro tsunami namely an'i Japana tamin'ny zoma 11 martsa lasa teo iny no niteraka fahasimbana goavana [ENG] ho an'ny foibe nokleary Fukushima-1, satria ny fijanonan'ny fomba fampangatsiahana dia niteraka trangan-javatra mampalahelo toy ny fipoahana matetika, afo, ary fiakaran'ny hafanana [ENG] teo amin'ny fitaovana mpamokatra herinaratra nokleary. Arakaraky ny fivoaran'ny zava-misy, dia mampiseho...